Chọpụta otu ị ga - esi họta họtel kachasị mma isoro ụmụaka | Akụkọ Njem
Susana Garcia | | Iso umuaka eme njem
Planningkwado njem ị ga-eme dịka ezinụlọ nwere ike isiri gị ike n'ihi mgbanwe niile anyị ga-ebu n'uche. Ọ dị ezigbo mkpa na ebe njedebe na ebe obibi dabara ụmụaka na ndị okenye dokwara ka ezinụlọ gị niile nwee obi ụtọ na njem ahụ. Họrọ họtel kachasị mma maka ụmụaka siri ike, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị amaghị ihe anyị ga-achọ.
Ọzọ anyị ga-agwa gị ụfọdụ n'ime ihe ndị ị kwesịrị ile anya na a ezigbo ụlọ ezumike maka ezinụlọ nwere ụmụaka. Ọ dị mkpa ịnwe ọrụ na isi ihe ndị a nke ọma iji mee nyocha na ịchụpụ ụlọ nkwari akụ na ebe obibi ndị ọzọ.
1 Họrọ ebe ị ga-aga
2 Ego maka ụmụaka
3 Ime ulo
4 Childrenlọ ọrụ ụmụaka
5 Clublọ Kid
7 Ọrụ pụrụ iche
8 Securitylọ nkwari akụ
9 Ọrụ nlekọta ụmụaka
Họrọ ebe ị ga-aga
Ọ dị mkpa ịhọrọ ezigbo ebe ezinụlọ niile ga-aga. Enwere ebe ndị maara nke ọma ma ya mere ọ ga-adịrị anyị mfe karị ịchọta ụlọ nkwari akụ na ụdị ọrụ a maka ụmụaka. Ebe njedebe kwesiri ịbụ ihe na-atọ ụtọ maka onye ọ bụla, ma ọ bụ n'ihi mmemme ma ọ bụ ebe ọhụụ. N'ọtụtụ oge, a na-achọ ụlọ oriri na ọ hotelsụ whichụ ebe ụmụaka na-atụrụ ndụ n'echebaraghị ihe a ga-ahụ ebe ha na-aga echiche. Ihe niile dabere na ụdị njem anyị chọrọ ime na ezinụlọ.
Ego maka ụmụaka
N'ọtụtụ ụlọ oriri na ọ hotelsụ offerụ ha na-enye ego maka ụmụaka. Enwere ọtụtụ ndị na-enyekwa ebe obibi n'efu maka ụmụaka n'okpuru afọ iri na abụọ. N'ọnọdụ ọ bụla, ị ga-elerịrị anya na ọnọdụ iji rite uru na ntinye na njem na ọnụ ala dị ala. Na mgbakwunye, ọ bụrụ na ị bụrụ nnukwu ezinụlọ, ihe na-agbagwoju anya, ebe ọ bụ na onyinye ndị a na-abụkarị maka ezinụlọ nwere naanị otu nwa.
Ọ dị mkpa ịhọrọ ime ụlọ. Ndị a nwere ike ịbụ soro ndị mụrụ ha kerịta ma ọ bụ enwere ike ịgwa ha ma ọ bụrụ na ụmụaka etoola. Ọ dị mkpa ịhụ ma ha nwere akwa ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ha karịrị otu nwa ma ọ bụrụ na ha na-enye akwa maka ụmụ ọhụrụ, ebe ọ bụ na n'ụzọ a, ọ ga-ekwe omume ịchekwa njem na akwa ndina.
Childrenlọ ọrụ ụmụaka
Na ụlọ oriri na ọ familyụ allụ ezinụlọ niile, ha na-enwekarị ụfọdụ ụlọ ọrụ ụmụaka na-ekpori ndụ ma nọrọ na-atụrụ ndụ. Facilitieslọ ọrụ ndị a nwere ike ịbụ ime egwuregwu na n'èzí egwuregwu, ọdọ mmiri ụmụaka, ogige ntụrụndụ, telivishọn ma ọ bụ ime ụlọ egwuregwu vidio. To ga-achọ ụlọ nkwari akụ nke nwere ntụrụndụ maka ụmụaka ma tụlee nkọwa nke ndị njem na foto iji hụ ma ha bụ ụlọ ọrụ zuru oke maka ụmụntakịrị.
Klọb ụmụaka bụ ezigbo echiche maka ụmụaka ịnụ ụtọ ya. N'ime ha ha nwere omume maka afọ ndụ ha, egwuregwu na ndị ọrụ na-elekọta ha mgbe ndị toro eto nwere ike ịnụ ụtọ ụlọ ọrụ nkwari akụ dị ka spa. N'ọtụtụ ụlọ oriri na nkwari akụ, klọb nwere akara oge, nke mere na ụmụaka nwere ike ikewa site n'afọ ndụ ka e wee nye ha mmemme dịka ọkwa ha si dị. Nke a bụ otu ọrụ na-adọrọ mmasị mgbe ị na-ahọrọ ụlọ nkwari akụ.
Ọ bụ ezie na imirikiti nnukwu ụlọ oriri na ọ hotelsụ theụ ndị menus bụ dịgasị iche iche ọbụna na nri ndị ahụN'ọtụtụ ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ ndị ezinụlọ na-eme, ha nwere menus ụmụaka. N’ụzọ dị otú a, ndị nne na nna na-azọpụta onwe ha ka ha ghara ihu ụmụ ha na-achọghị iri nri ha na-amaghị. N’ebe ụfọdụ ụlọ oriri na nkwari akụ, e nwere ọbụna ndị ọrụ na-ahụ maka ebe ụmụaka bi ka ndị nne na nna nwee ike iri nri n’udo ebe ụmụaka ahụ na-eri nri na mpaghara ha.
Ọtụtụ ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ na-enye ụmụ ọhụrụ ọrụ nlekọta pụrụ iche. Ọrụ ndị a na-elekwasịkarị anya na ụmụaka toro eto, na-echefu banyere ụmụ ọhụrụ ma ọ bụ ndị nọ n'afọ iri na ụma. Agbanyeghị, ụfọdụ ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ ndị zuru ezu na-enye nkata umu aka mmiri nwere ihe maka ha, ihe ndina ma ọ bụ oche dị elu na-arịọ. Enwekwara ụlọ oriri na nkwari akụ ebe ha na-eche banyere ndị nọ n'afọ iri na ụma ma nwee ihe omume ụfọdụ maka ha dị ka ebe egwuregwu vidio, ebe obibi ma ọ bụ egwuregwu.
Securitylọ nkwari akụ
E wezụga ọrụ ndị enwere ike ịkọwa na họtel, ọ dị mkpa iburu n'uche nchekwa na nkwari akụ. Ikwesiri ile anya nke oma na kwuru banyere ịdị ọcha nke ebe ahụ, yana foto ndị ahụ. Na mbara ihu ma ọ bụ windo dị mma, ụzọ ndị njem na ọkachasị ebe ụmụaka, site na ebe a na-egwu mmiri ruo ebe egwuregwu. Enwere ọtụtụ ụlọ nkwari akụ na-enye ọrụ mana anaghị a attentiona ntị na ụdị nkọwa ndị a nwere ike bụrụ ihe dị mkpa mgbe gị na ụmụaka na-eme njem.
Ọrụ nlekọta ụmụaka
Nke a bụ ọrụ ọtụtụ ndị nne na nna chọrọ inwe na họtel ka ha wee nwee ike ịnụ ụtọ ehihie ma ọ bụ abalị na-enweghị nchegbu gbasara ụmụaka. Ga mgbe niile gbaa mbọ hụ ụdị ọrụ ahụ ihe ha na-enye, ma ọ bụrụ na ọ bụ n'oge elekere na onye na-elekọta ụmụaka. Nwere ike ịkpọ ụlọ nkwari akụ ahụ maka ozi ndị ọzọ gbasara ọrụ a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways » Iso umuaka eme njem » Kedu otu esi ahọrọ họtelu iso ụmụaka